Wax ka baro tababarayaasha ugu weyn kubadda cagta caalamka | Radio Himilo
Home / Cayaaro / Wax ka baro tababarayaasha ugu weyn kubadda cagta caalamka
Wax ka baro tababarayaasha ugu weyn kubadda cagta caalamka
Tababaraha ama hoggaamiyaha waa midka ugu muhiimsan kubadda cagta. Waxaa jiray tababarayaal badan oo kubadda cagta soo maamulay muddo tobbanaan sanno ah kuwaasi oo sameeyay guulo badan xagga koobabka iyo taariikhaha islamarkaana saaray ciyaartoy magac iyo maamuus ku leh kubadda cagta, haddaba waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa 5 maamule oo sameeyay sheekooyin aan si naba loo rumeysan karin.
Ottmar Hitzfeld waa mid lagu qadariyo kubadda cagta Jarmalka, waxa uu ahaa ciyaaryahankii ugu guulaha badnaa kooxda Bundesliga ee Stuttgart VFB, waxaana uu bilaabay in uu raadsado xirfadda tababarnimo sannadkii 1983. Waxa uu noqday macalinka Borussia Dortmund 1991-kii wuxuuna kooxda gaarsiyay heer sarre. Dortmund ayaa laba sanno oo isku xigta gaartay finalka UEFA Champions League, waxayna ku guuleysatay horyaalkii 1996-97 iyadoo finalka ku garaacday Juventus.
Hitzfeld ayaa markaas kaddib qabtay Bayern Munich, waxaana mar kale uu gaaray dhowr final oo Champions League ah seddex sanno laga soo bilaabo 1998-99 illaa 2000-01. Waxay guuldarro 1-2 kala kulmeen Manchester United kaddib markii labo gool laga dhaliyay waqtigii dhaawaca ee dhammaadka 1998-99 final-ka Champions League. Si kastaba ha ahaatee, waxay sameeyeen soo kabasho kaddib markii ay rigoorayaal ku garaaceen Valencia xilli ciyaareedkii 2000-01.
Tababare Hitzfeld ayaa 4 jeer ku gaaray Champions League 5 sanno gudaheed, taasoo ah mid heer sare ah. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay 7 Bundesliga isaga oo tababare ah waxaana uu bilaabay in uu tababare u noqdo xulka qaranka Switzerland 2008-dii. Hitzfeld ma ahan tababare haatan laakiin waxa uu weli yahay mid ka mid ah tababarayaasha ugu yar ee ku guuleystay Champions League labo kooxood oo kala duwan.
2) Vicente Del Bosque:
Vicente del Bosque waa mid kamid ah tababarayaasha ugu guulaha badan taariikhda waxaana uu ku guuleystay koob kasta oo suurtagal ah koox iyo qaran. Waxa uu u soo ciyaaray Real Madrid, waxaana uu bilaabay xirfaddiisa tababarnimo 1994-tii. Del Bosque ayaa noqday macallinka buuxa ee Real Madrid sanaddii 1999-kii, wuxuuna ka caawiyay inay noqdaan kooxdii ugu weyneyd adduunka sannadkii 2000.
Real ayuu kula guuleysatay Champions League labo jeer seddex sanno gudaheed laga soo bilaabo 1999-2000 illaa 2001-02, sidoo kale horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2000-01 iyo 2002-03. Waxay 3-0 ku garaaceen kooxda Valencia finalkii Champions League 1999-2000, waxaana ay sidoo kale 2-1 kaga badisay Bayer Leverkusen finalkii 2001-02.
Del Bosque ayaa noqday tababaraha xulka qaranka Spain 2008-dii, waxaana uu ka caawiyay in ay ku guuleystaan ​​koobka adduunka 2010. Del Bosque ayaa sidoo kale ku guuleystay koobka qaramada qaaradda Yurub isagoo hoggaamiye u ah qaranka Spain sannadka 2012 kaddib markii 4-0 ku garaaceen Italy.
3) Marcello Lippi
Marcello Lippi ayaa macquul ah in uu yahay tababaraha ugu fiican kubadda cagta Talyaaniga mar walba, waxaana uu weli yahay mid ka mid ah tababarayaasha ugu guulaha badan Champions League iyo koobka adduunka..
Lippi ayaa u ciyaaray kooxda Talyaaniga ee Sampdoria, waxaana uu ku soo biiray xirfadda tababarnimo 1985-dii. Waxa uu noqday macalinka Juventus 1994-kii wuxuuna seddex jeer geeyay finalka Champions League 1995-96 illaa 1997-98. Si kastaba ha ahaatee, Juve ayaa ku guuleysatay keliya hal ka mid ah finaladaasi, madaama ay garaaceen Borussia Dortmund finalkii 1995-96.
Lippi ayaa Juventus ka dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan caalamka kubadda cagta adduunka intii lagu guda jiray dhammaadkii 1990-meeyadii iyo horraantii 2000. Mar kale ayuu ku guuleystay finalkii Champions League 2002-03.
Juve ayaa rigoorayaal kaga adkaatay Ac Milan laakiin Lippi ayaa weli ah mid ka mid ah tababarayaasha dhowrka ee kooxahooda muddo yar ku gaarsiiyay finalka Champions League isagoo 4 jeer ku tagay finalka muddo 8 sanno ah.
Waxa uu sidoo kale ku guuleystay 5 horyaal oo Serie A ah oo uu la qaaday Juve. Lippi ayaa macallin u soo noqday halyeeyo weyn, sida Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Gianluca Zambrotta, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Pavel Nedved iyo Alessandro Del Piero.
Waxa uu noqday macalinka xulka qaranka Italy 2004-tii, waxaana uu ka caawiyay inay ku guuleystaan horyaalkoodii 4aad ee koobka adduunka 2006. Italy ayaa finalka ku garaacday France. Lippi ayaa ah mid ka mid ah maamulayaasha ugu weyn ee wakhtiga oo dhan.
4) Rinus Michels
Rinus Michels wuxuu ahaa horjooge wanaagsan oo kubadda cagta caalamka ah. Kooxda Ajax ayuu ka dhigay kooxdii ugu fiicneyd Yurub intii u dhaxeysay 1960-meeyadii iyo horraantii 1970, waxaana uu kula guuleystay koobkii European Cup. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay 4 horyaal Eredivisie oo uu la qaaday Ajax.
Halyeyga Johan Cruyff ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu habboonaa ee Ajax muddadaas. Cruyff iyo Michels ayaa mar kale iskala soo muuqday xulkii qaranka Holland koobkii adduunka 1974-kii.
Xulka Netherlands waxaa sidoo kale ku jiray ciyaartoy weyn sida Johan Neeskens, Ruud Krol iyo Van Hanegem laakiin guuldarro ayay kala kulmeen West Germany 1-2 finalkaasi.
Michels ayaa la wareegay kooxda Barcelona sannadkii 1971-kii, waxaana uu sidoo kale caan ku noqday kooxda Catalan-ka. Cruyff ayaa ku biiray Barcelona sannadkii 1978 wuxuuna Barcelona ka dhigay kooxdii ugu fiicneyd Spain. Michels ayaa ku guuleystay horyaalnimada La Liga isagoo macallin u ah Barca. Mar labaad wuxuu noqday macallinkii xulka qaranka Holland sannadkii 1986-kii, waxaana uu ku guuleystay koobkii Euro ee 1988 isagoo 2-0 kaga badiyay Midowga Soofiyati.
5) Sir Alex
Michels ayaa ku dhiira geliyay jiilka ciyaartoyda sida Ruud Gullit, Marco Van Basten, Ronald Koeman iyo Frank Rijkaard.
Macallin kale ma imaan karo oo aan aheyn Sir Alex Ferguson marka loo fiiriyo guulaha iyo taariikhda uu ka sameeyay kubadda cagta.
Sir Alex ayaa beddelay Manchester United waxaana uu ka dhigay kooxda ugu weyn ee ugu caansan kubadda cagta. Waxa uu 27 sanno oo cajiib ah ku qaatay United, waxaana uu kula guuleystay 38 koob oo weyn.
Dad badan ayaan xasuusan in Ferguson uu tababare u ahaa kooxda xulka Scottish iyo Scottish club Aberdeen ka hor inta uusan ku biirin United 1986. Waxa uu sidoo kale kula guuleystay koobkii European Winners Cup naadiga Aberdeen. Si kastaba ha ahaatee, waxay qaadatay dhowr sanno si uu United ugu dhigo koox weyn islamarkaana uu ku guuleysto horyaalkiisii ​​ugu horreeyay ee Premier League 1990-91.
In ka badan 12 horyaal oo Premier League ah ayuu kula guuleystay ka hor inta uusan xirafadda tababarnimo isaga tegin 2013. Waxa uu sidoo kale ku guuleystay Champions League labo jeer waxaana uu ku dhameystay labo mar kaalinta labaad.
United ayaa gaartay 3 jeer finalka Champions League 4 xilli ciyaareed laga bilaabo 2007-08 illaa 2010-11. Waxay 2-1 ku garaaceen Bayern Munich finalkii 1998-99 iyo Chelsea oo ay rigoorayal kaga qaadeen xilli ciyaareedkii 2007-08.
Ferguson wuxuu ahaa tababare weyn, waxa uu lasoo saxiixday ciyaartoy waa weyn sida Cristiano Ronaldo, Peter Schmichael, Nemanja Vidic, Roy Keane, Wayne Rooney iyo Eric Cantona. Waxa uu sidoo kale xoojiyay ciyaartoyda da ‘yarta ah ee akadeemiyadda naadig sida Ryan Giggs, David Beckham, iyo Paul Scholes.
Previous: La kulan – qofka ugu da’da weyn caalamka
Next: Maqal:- Casharka Safiinatu Najaa “Darsiga 2aad”